Soomaaliya oo heshay suuqya cusub oo loo iibgeeyo badeecadaheeda. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo heshay suuqya cusub oo loo iibgeeyo badeecadaheeda.
Soomaaliya oo heshay suuqya cusub oo loo iibgeeyo badeecadaheeda.
Muqdisho (SNTV) Wasiirka Ganacsiga iyo Warshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay dadaal badan ka dib in lixdii bilood ee ugu dambeysay waxsoosaarka Soomaaliya uu helay Suuqyo cusub isla markaana Wax soosaarka Dalka lagu daabacay ( Made in Somalia) oo wata Shahaadooyinka bedqabka ee Dalka looga dhoofiyo.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Mudadii uu xilka hayay si gaara ay diiradda u saartay Wasaaradda Xoojinta Dhoofinta Waxsoo saarka Dalka.
“Lixdii bilood ee ugu dambeysay sanadkan ee aan hayey xilka Wasiirka Ganacsiga iyo Wershadaha waxaanu xooga saarnay xoojinta dhoofinta waxsoosaarka Soomaaliya, anagoo horumarinay helista suuqyo cusub, kor u qaadista tayada iyo muuqaalka Badeecadaha la dhoofinayo, iyo siinta sharciyad iyo Shahaado la aqoonsan yahay “made in Somalia” iyo wixii la mid ah si aanu u dheelitirno wada shaqeynta Ganacsi ee inagala dhexeysa Wadamada aynu la Ganacsano”.ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa isbedelo badan ka sameysay Ganacsiga iyo Dhaqaalaha Dalka, iyadoo Dalal badan ay heshiisyo Ganacsi la galeen Soomaaliya maadaama ay arkeen Horumarada lagu talaabsanayo, iyadoo dalkeena uu Kheyraad badan EEBE ku maneystay.
Previous articleAbaanduullaha Ciidanka Xoogga oo ka Warbixiyay deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray Alshabaab
Next articleXildhibaanada Golaha Shacabka oo Kulankii Labaad ka yeelanaya Dooda ku saabsan Amniga